Navotsotra Ilay Iraniana Mpanao Sariitatra Nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2016 8:59 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, English, اردو, русский, Español, English
Nanambara ny famotsorana azy tao amin'ny Fonjan'i Evin tamin'ny sariitatra tao amin'ny kaontiny Instagram i Hadi Heidari.
Navotsotra tany am-ponja ilay mpanao sariitatra Iraniana Hadi Heidari. Nanambara ny famotsorana azy tamin'ny Talata 26 Aprily tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Instagram ity mpanakanto ity, izay nanomezany fisaorana ihany koa ho an'ireo namany sy mpanohana azy teo anilany hatrany nandritra ny fanagadrana azy.
Arahaba ry fahafahana! Noho ny fitahian’ Andriamanitra, navotsotra tao amin'ny Fonjan'i Evin aho androany alina rehefa nahavita sazy. Misaotra anareo rehetra tamin'ny fitiavana nasehoanareo. Feno fankasitrahana tanteraka ho anareo namako rehetra sy ny fianakaviako nanohana ahy nandritra izany fotoana izany aho. Misaotra. Manantena aho fa mendrika ny fitiavanareo.
Nisarika ny sehatra iraisampirenena i Heidari tamin'ny sariitatrany manamarika ny fanafihana Novambra 2015 tao Paris, izay nahafatesana olona maherin'ny 120. Nosamborina izy fotoana fohy taorian'ny famoahana ny sariitatra.
Sariitatr'i Hadi Heidari “nitomany i Frantsa” nanaitra ny fihetseham-po taorian'ny fanafihana 13 Novambra tao Paris. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'i i Heidari.
Manamarika ny fiafaran'ny olany vao haingana indrindra tamin'ny manampahefana Iraniana ny famotsorana an'i Heidari. Nosamborina tamin'ny taona 2009 taorian'ny fifidianana filoham-pirenena izy ary nosamborina indray avy eo ny Desambra 2010.
Midika izany hoe: tsy vaovao amin'ny adihevitra intsony i Heidari. Ny sariitatrany, The Blindfolded Men (ilay lehilahy notampena-maso), nivoaka tao amin'ny Shargh News ihany koa dia nitarika fanagadrana ny tonian-dahatsoratry ny gazety tamin'ny taona 2012. Noraisin'ny sasany ho toy ny fanevatevana ireo menavazana tamin'ny ady Iran-Iraka ny sariitatra. Ny ampitson'ny nivoahan'ny sariitatra, nampanantsoina hijoro vavolombelona tany amin'ny fitsarana i Heidari. (Noafahana madiodio tamin'ny fiampangana rehetra ihany nony farany ny gazety sy ny tonian'ny famoahana.)
Notaterin'ny Global Voices tato [mg] ny fisamborana an'i Heidari tamin'ny taona 2015.
Na izany aza, mbola misy ireo mpanakanto any am-ponja ao Iran. Ohatra, i Ahatena Fargdani, mpanao sariitatra iray hafa mbola any am-ponja. Tamin'ny Alatsinainy 25 Aprily, nandre izy fa nahena ho 18 volana ny saziny 12 taona an-tranomaizina. Tokony hivoaka any am-ponja izy izany amin'ny tapaky ny volana May.